laacibfm.com » Haddii Barcelona Si Xun Ula Dhaqantay, Sida Uu Daawashada Ciyaaraha Uga Fogaado, Guul-darrooyinkii Roma & Liverpool U Xambaariyeen Iyo Ernesto Valverde Oo Markii Ugu Horreysay Si Faahfaahsan U Hadlay
Haddii Barcelona Si Xun Ula Dhaqantay, Sida Uu Daawashada Ciyaaraha Uga Fogaado, Guul-darrooyinkii Roma & Liverpool U Xambaariyeen Iyo Ernesto Valverde Oo Markii Ugu Horreysay Si Faahfaahsan U Hadlay
Tababarihii hore ee kooxda kubadda cagta Barcelona, Ernesto Valverde ayaa markii ugu horreysay si qoto-dheer uga hadlay waayihiisii Barcelona, shaqo ka caydhintiisii iyo guul-darrooyinkii xanuunka badnaa ee kasoo gaadhay AS Roma iyo Liverpool labadii sannadood ee ugu dambeeyey.
Ernesto Valverde waxa uu sheegay in intii uu kasii maqnaa shaqada Barcelona uu isku dayey inuu ka dheeraado dhamaan ciyaaraha, balse kaliya uu hal kulan si dhamaystiran u daawaday, taas oo ahayd ciyaar niyad-jab ay la kulantay kooxdiisii hore oo lagaga reebay tartanka Spanish Copa del Rey.
Valverde waxa uu tilmaamay inuu dib ugu soo laaban doono shaqada tababarenimada, ayna u calaamadsan yihiin meelo fog sida waddanka Japan, halkaas oo uu xusay in uu Andres Iniesta wax badan uga sheegay.
“In badan maan daawan ciyaaro toddobaadyadii tegay, kaliya waxaan si buuxda u daawaday ciyaartii Athletic Club iyo Barcelona ee tartanka Copa del Rey.” Ayuu hadalkiisa ku bilaabay Ernesto Valverde.
Tababaraha reer Spain, waxa uu sheegay inuu isku dayo inuu ka fogaado kubadda cagta oo uu danihiisa gaarka ah qabsado, waxaanu yidhi: “Waxaan isku dayey inaan xoogaa kala fogeeyo naftayda iyo kubadda Cagta. Marka aad koox joogto, waxa aad soconaysaa 200 mile saacaddii, kaddibna si degdeg ah ayaad dhaqaaqa u joojinaysaa, mar walba way adag tahay inaad aragto koox aad dhowaanta soo tababartay marka aad doonayso inaad naftaada dib u dhisto.”
Valverde waxa uu intaa kaddib ka hadlay guul-darrooyinkii xanuunka badnaa iyo qaabkii aan wanaagsanayn ee ay kooxdiisii Barcelona uga soo hadhay tartanka Champions League labadii xili ciyaareed ee tegay, kuwaas oo ay Roma iyo Liverpool kasoo reebeen, waxaanu yidhi: “Aniga way ii kala duwan yihiin. Kulankii Roma ciyaarta maanaan dhamaynin, halka Liverpool ay waqti hore gool naga dhalisay kaas oo aanu doonaynay inaanu iska ilaalino.
“Labada xaaladoodba hal gool ayaanu ugu soo bixi lahayn, laakiin aad ayay u adag tahay in lagu guuleysto Champions League. Dhamaan tartamadu waxay ku xidhnaan karayaan hal ciyaar, hal xaalad, laakiin horyaalku wuxuu qiimeeyaa wixii aad soo samaysay sannadka oo dhan.”
Ugu dambayn, Valverde waxa uu ka hadlay qaabkii ay Barcelona shaqada uga caydhisay , haddii si xun ay ula dhaqantay, waqtiga uu shaqada kusoo laaban doono iyo halka uu ku aaddan yahay, waxaanu yidhi: “Tababaridda Barcelona waxay ii ahayd khibrad cajiib ah, waan ku faraxsanahay inaan halkaas joogay, laakiin marka aad heshiis u saxeexayso ayaad sii ogtahay in wax walba ay ku xidhnaan doonaan natiijooyinka iyo in uu tababaruhu wax walba masuul ka noqon doono.
“Kama fikiro haddii si caddaalad darro ah la iila dhaqmay,waa maxay wanaagga dibu-noqodka ahi?
“Waxa aan xiisaynayaa inaan hore u socdo inkasta oo aanan wali go’aamo gaadhin, laga yaabaa inuu socod dheer noqdo, Andres Iniesta ayaa wax badan iiga sheegay Japan, waxa aan qorshaynayaa inaan tago oo aan kooxo badan daawado, waxa aan rabaa inaan arko tababareyaal kale oo aan wax badan kala xaajoodo iyo xaaladaha ay shaqadu ku iman karayso.”